वैदेशिक रोजगारको चुनौती र समाधान
काठमाडौं । भरतपुरका अनिल परियार जुन कामका लागि साउदी अरब गएका थिए, त्यसअनुरूप काम उनले पाएनन् । विदेशमा जान मरिहत्ते गरेकै कारण उनले अन्य विषयवस्तुमा ध्यान नै दिन पाएनन् । सबैतिर सोधखोज गर्दै विदेशिएका सप्तरीका मिथिलेश यादव पनि वैदेशिक रोजगारमा नराम्रोसँग फसे । अहिले उनीहरू मानसिक कष्टका साथ काम गर्...
वैदेशिक रोजगार पीडितका परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मुत्यु, अङ्गभङ्ग र गम्भीर बिरामी भएका कामदारका छोराछोरीले अब जुनसुकै मुलुकमा पूर्ण छात्रवृत्तिसहित अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल सरकारले प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालीम दिने व्यवस्था गरेसँगै वैदेशिक रोजगारको क्रममा ज्यान गुमाएका तथा अङ्गभङ्ग भएकाको परिवार...
शीपविकास तालीम केन्द्रको कार्यक्रम अन्योलमा
सुनसरी । सुनसरीको इटहरीस्थित शीपविकास तालीम केन्द्रलाई कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्योल भएको छ । उक्त केन्द्रले चालू आवमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शीप विकासका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । राज्यको प्रशासनिक संरचना फेरिएपछि केन्द्रको सञ्चालन विधि पनि फेरिएकाले लक्षित कार्यक्रम अघि बढाउन अन्यो...
कहाँ पुग्दैनन् उनीहरू ! गाइड र भरियाका आफ्नै कथाव्यथा
जीवनमा एक न एकपटक मानसरोवर पुग्नु नेपाल र भारतका साथै अब त विश्वभरका मानिसको पनि सपना हो । हिन्दू तथा बौद्धमार्गीको पवित्र तीर्थस्थल मानिने मानसरोवर पुग्न सके मृत्युपछि सुगति हुने विश्वास गरिन्छ । जवानीमा नसके बुढेसकालमा मर्नैका लागि मात्र भए पनि पुग्न चाहनेहरू पनि छन् । त्यति हुँदा पनि सबैलाई एकै प...
वैदेशिक रोजगार : कामदार घट्दै, विप्रेषण बढ्दै
काठमाडौं । केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या घटेको देखिए तापनि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह भने बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को पहिलो त्रैमासिक तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । उक्त तथ्याङ्कअनुसार केही वर्षदेखि वैदेशिक र...
जागीर छाड्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरु
आफ्नै इच्छा वा बाध्यताले नै किन नहोस्, जागीर छोड्ने काम तनावपूर्ण हुने गर्छ । जागीर छोड्ने कुरामा आफू निश्चित भएपछि राजीनामा दिने क्रममा धेरैजसोले गम्भीर गल्ती गर्छन् । खासगरी आफ्नो ‘बोस’वा कार्यालयसँगको सम्बन्धलाई सहजीकरण गरेर हार्दिकतामा टुङ्ग्याउनुको सट्टा उनीहरू भएको सम्बन्ध झन् खराब बनाउन उन्मु...
ठूलो एकादशी (हरिशयिनी)को दिन पशुपतिमा भव्य मेला लाग्ने गर्छ । ललितपुर कुपण्डोलका शिवप्रसाद अर्याल पनि २०४७ असार १९ गते ठूलो एकादशीको दिन मन्दिर दर्शनका लागि साइकलमा पशुपतितर्फ गइरहेका थिए । तर दुर्भाग्य, पुरानो बानेश्वर पुग्नै लाग्दा उनी दुर्घटनामा परे । आफू सवार साइकललाई गाडीले हानेपछि शिवप्रसाद...
कसरी दिने प्रभावशाली अन्तरवार्ता ?
जागीर दिनुभन्दा पहिले सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले आवेदकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तरवार्ता लिने गर्छन् । वास्तवमा अन्तरवार्ता नै रोजगारी पाउने आधार हो । यसैले, रोजगारीको क्रममा अन्तरवार्ता एउटा महत्त्वपूर्ण चरण हो । आवेदक प्रतिस्पर्धीलाई जागीर दिने/नदिने अन्तिम निर्णय अन्तरवार्ताबाटै...
समूहमार्फत आत्मनिर्भर बन्दै महिला
रौतहट । रौतहटको गुजरा नगरपालिका–५ लक्ष्मीपुरकी ३६ वर्षीया तसलिमा खातुन अहिले आत्मनिर्भर बनेकी छिन् । स्ट्रोम फाउण्डेशन नर्वेको आर्थिक सहयोग र साहस नेपाल रौतहटको समन्वयमा चुरा व्यवसाय गरेकी खातुनले अहिले दैनिक २ हजार कमाउने गरेकी छिन् । आशा स्वावलम्बन समूहमा रहेकी उनले साहस नेपालले ऋण दिएपछि व्यवसाय...
म्याग्दी । कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि देशका युवामा कृषि पेशाप्रति उतिसारो विश्वास छैन । आवश्यक प्रविधि, शीप तथा तालीमको अभाव, सिँचाइ, मलखाद, अनुदानलगायत सुविधा नहुँदा यस क्षेत्रमा भविष्य देखेरै लाग्नेहरू कमै छन् । त्यसैले, अधिकांश युवा यिनै कारण देखाउँदै रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।...